IZIMVO ZOMQOLOMBA WOMNTU (ISIKHOKELO SOYILO) - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila Izimvo zomqolomba woMntu (Isikhokelo soYilo)
Izimvo zomqolomba woMntu (Isikhokelo soYilo)
Nasi isikhokelo sethu kumqolomba womntu weengcinga zomgangatho kubandakanya iintlobo ezithandwayo kuyilo lwakho lwangaphakathi. Igama elithi umhume womqolomba linokubonakala ngathi liphelelwe lixesha, kodwa imiqolomba yendoda, njengokuphalaza kwayo, iseyi-rave. Umqolomba wendoda ubonelela ngendawo yokuphumla uwedwa, ukuchitha ixesha nabahlobo, ukubukela imidlalo, ukudlala imidlalo yevidiyo, okanye ukusebenza kwiprojekthi.
Ngokwesiqhelo, xa kuyilwa umqolomba wendoda, ugxininiso kukuyilwa kunye nokuhonjiswa. Umgangatho uhlala ungakhathalelwanga, ukanti ukutyibilika kunokubonelela ngokugqibezela ukujikeleza igumbi.
Kunganzima ukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi i-floor oza kuyifaka emqolombeni womntu, kwaye kuyanceda ukugqiba xa ucwangcisa iprojekthi, hayi emva kokuba zonke ezinye izinto zigqityiwe. Izinketho zomgangatho zixhomekeke kuyilo lilonke kunye nenjongo, njengokusebenzisa i-flooring ukwandisa uyilo, ukongeza intuthuzelo, ukubonisa ukukhanya, ukongeza ii-accents, okanye ukwenza i-rustic touch.
Ukukhetha i-flooring kunokuba yinto emnandi kunye noyilo, ukuyithelekisa nezinto zegumbi kunye nomxholo. Uninzi lwemiqolomba yamadoda inesihloko esithile esiqhuba i-décor, kwaye i-flooring yinxalenye enkulu yokubopha konke kunye.
Funda esi sikhokelo sokwazisa ngemibono yomqolomba womntu. Nokuba ujonge ukwenza indawo yakho ibutofotofo, i-woodsy, ezemidlalo, okanye ukubonakalisa izinto ozithandayo, umqolomba womntu unikezela ngeendlela ezininzi.
Umgangatho weVinyl yoMgangatho
Iithayile zoMgangatho ezingena ngaphakathi
Igumbi leMidlalo yoMgangatho
IVinyl yokuhombisa iza njengeplanga okanye iithayile kwaye yenza ukhetho olukhulu xa kufuneka kugalelwe umgangatho. IVinyl yobutofotofo ihlala ixesha elide kwaye iyomelela, ezinye iimveliso nokuba zingangeni manzi.
Emqolombeni wendoda enezinto ezininzi ezenziwayo, iiprojekthi, okanye ukunxiba rhoqo, i-vinyl yokunethezeka iyaphakama kwaye iyamelana neenyembezi okanye ukonakala. Umphezulu kulula ukuba ucoceke kwaye usebenza kakuhle kumqolomba wendoda okwindawo engaphantsi enokubakho ekuvuza kwamanzi. Uninzi lweemveliso ze-vinyl zokunethezeka zibandakanya i-padding eqhotyoshelweyo yokulwa imigangatho ebandayo engaphantsi.
iingoma zelizwe ukuhamba ezantsi ukuya ku-2015
Ukufaka i-vinyl yokunethezeka emqolombeni womntu kwenza kube lula ukuthelekisa phantse nasiphi na isitayile kunye noyilo. I-Luxury vinyl flooring iza ngemibala emininzi kwaye igqityiwe.
Iiplanga zeVinyl ezifana neeplanga zomthi onzima zinikezelwa kukhetho oluninzi ukuze zikhangeleke njengomthi owaziwayo. Iiplanga ze-vinyl ezityebileyo kunzima ukwahlula kumthi wendalo kwaye uxhathise ukungunda ngomhlaba oqinileyo wamanzi. Funda ngakumbi malunga Nokwadala SPC Olu luhlobo lophahla lwevinyl oluphinda ukujonga ukhuni lwendalo.
Kukwanjalo nakwiithayile ezenziwe ukuba zibonakale ngathi ziintlobo ezininzi zamatye kunye nexabiso eliphantsi lemabhile elinjengelitye lekalika, idolomite kunye nequartz. Ukucoca kulula njengokucoca ngokukhawuleza okanye ukutshayela kunye nokufuma okumanzi xa kufuneka njalo.
Olunye ukhetho oluzinzileyo lomgangatho emqolombeni womntu laminate flooring. I-Laminate iyafikeleleka kwaye, njenge-vinyl yokunethezeka, iza kukhetho olufana neenkuni zendalo ezibizayo kunye nokukhethwa kwamatye. I-Laminate ithathwa njengomgangatho odadayo, efakwe ngaphezulu kwesiseko esele sikhona.
Umnini khaya we-DIY unokufaka i-laminate ngokulula, kodwa kuyacetyiswa ukuba kuqeshwe isifakeli sobuchule ukunqanda naziphi na iingxaki kamva. I-Laminate ikwabonelela ngendawo engenamanzi, kwaye uninzi lweemveliso zinikezela ngokufudumeza kunye nokuthuthuzela.
malini ukunika ingcebiso ku-dj emtshatweni
Sihlanganise ukudibanisa i-laminate vs vinyl yaphantsi kweli phepha ukukunceda uthathe isigqibo phakathi kwezi ndlela zimbini zaziwayo.
Ikhaphethi yomqolomba wendoda ibandakanya iindlela ezimbalwa zokuphucula umxholo kunye nokujonga kwegumbi. Olona khetho luthandayo ekuphepheni kukusebenzisa iithayile zekhaphethi.
Iithayile zekhaphethi zihlala zingena kwizikwere ezili-18 - x 18. Ukongeza kwimibala eqinileyo okanye iipateni, iithayile zekhaphethi ziza ngaphambili kunye neelogo zeqela lezemidlalo lendawo yomqolomba eyenzelwe fan yezemidlalo. Ezi tile zekhaphethi zibandakanya ukutshintshela iithayile zombala eziqinileyo ukwenza umtsalane kunye nomdlalo ojolise kwimidlalo.
Imizekelo yezinye iipateni zekhaphethi zekhaphethi zibandakanya iipateni zejiyometri, iipateni ezinemixholo enjengokuhlala kwelizwe okanye ubomi baselwandle kunye neethayile zekhaphethi ezinobude obahlukeneyo ukwenza ukubukeka kwe3D.
Iithayile zekhaphethi zeza nephedi yokuncamathelisa kunye nemicu yokuncamathelisa enamacala amabini eyenza ukuba kube lula ukuncamathisela kumgangatho wekhonkrithi kunye nezinye izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni. Kananjalo zihlala ixesha elide kwaye zenziwe ukuba zinganyangeki. Yabona iintlobo ezahlukeneyo zekhaphethi Apha.
ilokhwe yomtshakazi emnyama nepinki
Umgangatho werabha wenziwe ngerabha edityanisiweyo kwaye uza njengeshiti elixineneyo, ekulula ukulikhupha ngaphezulu kwekhonkrithi okanye kumgangatho wethayile. Kuza kwakhona kwiithayile ezilungiselelwe ukugubungela indawo engaphezulu kwesiko.
Umgangatho werabha womqolomba wendoda wenza umhlaba onokumelana nobunzima obunzima obuwayo, njengezixhobo okanye izixhobo zokuphakamisa ubunzima. Yenza ukhetho olugqwesileyo kwindawo yokuzivocavoca ekhaya okanye kwigaraji eneempawu zayo zokutsala kunye nokucoca ngokulula.
Ngenxa yokuba i-raber flooring ayifakwanga okanye iqhotyoshelwe kumphezulu ongezantsi, kulula ukuyitshintsha kufuneka ichitheke ngezinto ezinjengeoyile kunye negrisi.
Iithayile zangaphakathi ezingena ngaphakathi zisebenza ngokufana nepele kunye neetayile zekhaphethi kodwa zenziwe ngevinyl okanye irabha ukongeza kwikhaphethi.
Iithayile ezizodwa zivumela umntu ukuba abekwe emqolombeni phantsi ukuba abekwe kunye noyilo lwesiko kunye neepateni zokutshatisa i-deco kunye nomxholo wegumbi. Umqolomba wendoda onomxholo we-diner engama-50 ujongeka umhle ngeethayile zomgangatho ezingena mnyama namhlophe.
Iithayile zomthi ezingena ngaphakathi zinonxibelelwano lohlobo lwejigsaw ukwenza umgangatho ongenamthungo. Benza ukubukeka kweklasiki kweofisi yomqolomba wendoda okanye umqolomba wendoda obuthetha ukuba yindawo yokubuyela umva. Imiqolomba yomntu eneithayile zokhuni ezinxibelelanayo zisebenza kakuhle kwithala leencwadi okanye kwisifundo.
Ukuba umqolomba womntu kufuneka abe nesitayile esidala, ukutyibilika komthi okhuni lukhetho olufanelekileyo. Umgangatho wokhuni oluqinileyo awuphelelwa lixesha kwaye umelana nokuhamba kweenyawo kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Ezinye iinkampani zomthi onzima zibandakanya ukutyibilika okungagqitywanga okungagcinwa ngamanzi kwezi ndawo zichithekileyo kuya kwenzeka xa abahlobo betyelele umqolomba wendoda. Kwigumbi elingaphantsi, ubunjineli bomgangatho wokhuni olomeleleyo luyimfuneko okanye sebenzisa i-vinyl eyenziwe ukuba ibonakale njengomthi.
Imiqolomba emininzi yamadoda idluliselwe kwigaraji, kwigumbi elingaphantsi okanye eshedini yangaphandle, kwaye ezi ndawo zihlala zinomgangatho omdaka wekhonkrithi. Ikhonkrithi inokusebenza kwezinye iimeko, kodwa ukubeka ibala lekhonkrithi kwenza ukhetho olulula nolungabizi kakhulu ekwenzeni umhlaba ube semgangathweni.
gcina izimvo zesimemo somhla
Amabala ekhonkrithi eza ngemibala eyahlukeneyo, evumela imigangatho ukuba ifane nomxholo wegumbi okanye uyilo. Kubalulekile ukusebenzisa ibala lodidi oluphezulu olwenzelwe ikhonkrithi kwaye ulisebenzise ngokulinganayo ngaphandle kokuba ufuna ukongeza umnwe wobugcisa.
Nje ukuba umgangatho wekhonkrithi uchithe ngokupheleleyo, uya kujongeka njengomgangatho omtsha ngeqhezu leendleko. Bona Okuninzi iintlobo zokugqitywa komgangatho wekhonkrithi kweli phepha.
Imigangatho ye-epoxy yenziwa ngombala okhethekileyo ofakwe ngaphezulu kwenqanaba, elungiselelwe indawo engenazo iintanda okanye ikhefu kwisiseko. Kuyimfuneko ukuba imiqolomba yomntu yenzelwe ukonwaba rhoqo ngamathuba okuchitheka rhoqo, kubandakanya iziselo ezinxilisayo, iwayini, ibhiya kunye nokutya.
Inkqubo yokusebenzisa i-epoxy ayisiyonto ilula. Xa i-epoxy ilungisiwe, kwaye emva koko i-hardener yongezwa, iqala ugqatso ngokuchasene newotshi.
I-epoxy yoma ngeeyure ezimbini yenza kube nzima ukugqiba igumbi lonke kwisicelo esinye. Nangona kunjalo, izibonelelo zalo monakalo onganyangekiyo kunye nomgangatho omdaka zenza ukuba uxabise umsebenzi owongezelelweyo.
Ukungancedi kwe-epoxy flooring kubandakanya ukuba kunzima ukuyisusa, kudala indawo ebandayo yeenyawo ezingenanto, kwaye ukufuma okuvaleleke phantsi komphezulu we-epoxy flooring kubangela umonakalo omkhulu.
Emuva ngemini, abahlobo ababanda kakhulu babenamagumbi omdlalo agcwele itafile yeephuli, itafile ye-foosball, iVCR kubandakanya uninzi lweemovie kunye nebha emanzi. Ingcinga isalungiselela ezona zihlobo zilungileyo namhlanje, kunye nomqolomba wendoda ophindwe kabini njengegumbi lokudlala lenza i-hangout eyithandayo.
Igumbi lokudlala lomgangatho kufuneka likulungele ukudlala kunye neempawu ezinje ngokunganyangeki kwamabala, ukhululekile kwiinyawo ezingenanto, ube nomphezulu ogudileyo wokuhamba ujikeleze itafile yephuli okanye itafile yebhola ye-foosball, kunye nokukwazi ukuphatha ukusetyenziswa gwenxa.
Ikhaphethi yamkelekile kwaye ikhululekile kubadlali bebhola, iyenza ibe ngumqamelo obalaseleyo wokuhlala phantsi. Ikhaphethi yegumbi lomdlalo kufuneka ihlale ixesha elide kwaye inganyangeki.
Ukukhetha ikhaphethi enje ngeBerber enemibala exubeneyo kunceda ukufihla amabala asisigxina okanye ukuchitheka. IBerber yalukwa ngentambo eshinyeneyo, enzima kwiziqwenga ezahlukeneyo ezaziwa ngokuba ziiluphu. Ikhaphethi yaseBerber ngesiqhelo inombala osisiseko wokukhanya onemibala emnyama kunye nee-shades ezixubeneyo, okwenza kube lula ukufihla ubumdaka.
Umgangatho wokhuni oluqinileyo lukhetho kwigumbi lokudlala kodwa lihlala lisebenza kakuhle kwisithuba esenzelwe imidlalo ebalaseleyo enje nge-chess kunye ne-cribbage.
I-Hardwood lukhetho oluqhelekileyo, kwaye nangona ihlala ixesha elide kwaye ihlala ixesha elide, isenokungabi mnandi njengokukhaphethi. Olunye uhlobo olunamaxabiso aphantsi kumgangatho wokhuni oluqinileyo, i-vinyl yokunethezeka ibonelela ngenketho yolondolozo olusezantsi ngenkangeleko yemithi yendalo.
Ngelixa i-carpeting isebenza kwigumbi lomdlalo eliqhelekileyo, elisetyenzisiweyo kunye nomthi onzima uboleka ukujonga okuthe kratya, kuyanceda ukufumanisa ukuba igumbi lokudlala libandakanya ntoni kwigumbi lomdlalo. Ukuba igumbi lomdlalo yindawo yabantwana yokudlala kunye nokugcina iithoyi zabo, i-Berber carpeting yenye indlela ethambileyo ye-vinyl okanye i-laminates.
Eyona ndoda intle intetho yokuvula imigca
Ukuba ulutsha luza kusebenzisa igumbi lomdlalo kwimidlalo yevidiyo, ukutya, nokumema abahlobo ukuba beze, ikhaphethi yangaphandle ibonelela ngokucoceka okulula, ukuhlala ixesha elide, kwaye ukungunda nokungunda kuyangunda.
Kwigumbi lomdlalo wabantu abadala elinetafile yeephuli, ibha, isikrini esikhulu seTV kunye nefenitshala efanelekileyo yokutyelela nokubukela umdlalo omkhulu, i-laminate flooring iphatha ukugcwala kweenyawo ezininzi kwaye icoca ngokulula.
Izinketho zeVinyl zenza ukhetho olufanelekileyo kwigumbi lomdlalo oxakekileyo, kubandakanya iiplanga ezenziwe ngokhuni okanye iithayile ezenziwe ukuba zifane nelitye. Umgangatho olaminethiweyo uyanyamezela ukuchitheka kunye nokusetyenziswa okunzima iminyaka emininzi yolonwabo kwigumbi lomdlalo.
Yeyiphi eyona mibono yakho yomqolomba oyithandayo? Sazise apha ngezantsi. Ngolunye uyilo olunxulumene noko ndwendwela iphepha lethu malunga izimvo zomqolomba omncinci Apha.
Ngubani igama lomfazi ka-donald trump
indlela yokwenza ibhasikidi yentombazana yeentyatyambo
kuchaphulo olu malunga nothando ngaye
ixabisa malini isithembiso
iringi yakho yomtshato iqhubeka ngantoni
izimvo zepati zebhalhelorette eziphambili